I-Cozy Loft, eduze ne-Old Town, indawo yokupaka yamahhala
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Valjo
Ifulethi lami lesitudiyo sesitayela esiphezulu litholakala eCity Center yaseTallinn, eduze neTallinn Old Town kanye netheku.
Igumbi lokuhlala elincane, kodwa elibanzi linakho konke okudingayo: umbhede usofa, i-TV, amafasitela amakhulu kanye nekhishi. Phezu kwalo "igumbi lokulala" elithokomele elinemibhede emibili ehlukene ukuze ujabulele amaphupho akho amnandi kakhulu.
Ukuhambahamba kulula kakhulu njengoba kunezitobhi zamabhasi nezethilamu ngaphambi nje kwebhilidi lakho!
Ngolwazi lomlando lesi esinye sezakhiwo zamapulangwe ezindala kakhulu ezinesitezi eTallinn.
Leli fulethi elithokomele nelivuselelwe ngokuphelele enkabeni yedolobha laseTallinn linendawo engcono kakhulu ongayicabanga ngenkathi uhlala eTallinn njengoba yonke into iyindawo ekude.
Leli fulethi liqukethe:
Igumbi lokuhlala elinophahla oluyi-3.2m
+ umbhede kasofa ophindwe kabili onethezeke ngempela
+ imibhede emibili "phezulu"
- Amabhodwe / Amapani / Amapuleti amaningi okudla okukhulu
- Izitsha eziphakelayo
- Izinkomishi zekhofi nezibuko
- Ikhofi, itiye, ushukela, amafutha
...ngakho-ke, sinakho konke okudingayo ukuze upheke ukudla kwezifundo ezi-3 noma inkalankala ikhofi esheshayo!
Geza ngokushesha njengomuntu ophakeme weqiniso!
Yebo sinawo amathawula azo zonke izivakashi. Bantu besifazane, kukhona okokomisa izinwele kanye nezimonyo ezinikhiphela amaphedi kakotini. :)
Ngihlale ngibheke ngabomvu ukusingatha abantu abakhulu, ngakho-ke ngizobe ngilindele umbuzo ovela kuwe!
4.67 ·15 okushiwo abanye
Isakhiwo esinamafulethi sisenkabeni yeTallinn komunye wemigwaqo emikhulu eCity Centre.
I-100meters (m) ukusuka endlini kunesitolo segrosa (Selver ABC), 70m ikhemisi (Benu apteek), 30m umshini wemali we-ATM - ngakho yonke into iseduze kakhulu.
Umgwaqo iNarva maantee, lapho ifulethi likhona, uqala eViru Square (Idolobha Elidala - 10min uhamba ngezinyawo), unezindawo zokuthenga ezinkulu (iPostimaja neViru Keskus - ukuhamba imizuzu eyi-5) namabhange (Coop, SwedBank), iseduze kakhulu nePort. yaseTallinn (ngohambo lwesikebhe oluya eFinland naseSweden - imizuzu eyi-13) nangaphesheya komgwaqo usuka ekhaya - kukhona neNyuvesi yaseTallinn (eyasungulwa ngo-1919 futhi ikleliswe kwabayi-1000 abaphambili emhlabeni).
Indawo ilungile, ngoba ngebanga lokuhamba (2km) ungaya emagcekeni e-Estonian Song Festival lapho i-Estonia ngokusobala yazicula ngokukhululeka ngo-1990 - ingenye yemicimbi emikhulu yamakhwaya yabafundisayo emhlabeni, ehlanganisa abaculi abangaphezu kuka-30,000. enandisa izethameli ezingu-80,000.
Njengoba ngenza inkampani yokuqala, ngakho-ke ngihlala ngihamba. Kodwa njengoba ngihambe amazwe angu-41 emhlabeni jikelele, ngingumuntu othanda abantu namasiko ahlukene, futhi ngingathanda ukuhlanganyela nezivakashi zami uma nginesikhathi. Ngakho ungazise uma udinga noma yiluphi usizo, futhi ngingajabula ukukubonisa eduze / ngenze ukuhlala kwakho kujabulise kakhulu.
Njengoba ngenza inkampani yokuqala, ngakho-ke ngihlala ngihamba. Kodwa njengoba ngihambe amazwe angu-41 emhlabeni jikelele, ngingumuntu othanda abantu namasiko ahlukene, futhi ngin…